Ukuhlaselwa kwebhokisi. Indlela Yokuwasusa Esimweni Sakho - Ukuzijwayeza kwe-Semalt
Uma unesifo se-malware noma osolisayo, kufanele sibe bot, futhi kufanele ususe ngokushesha ngangokunokwenzeka. Amabhulogi ayi-software engalungile engakwazi ukuthelela kalula izinhlelo zakho zekhompyutha, izisebenzi zokusebenza namadivayisi eselula kakhulu. Zisetshenziswa abaduni ukusabalalisa ugaxekile, ukusabalalisa ukuhlaselwa kwezinsizakalo nokuziphatha ezihlukahlukene zobugebengu kwi-intanethi. Okwamanje, kuyiqiniso ukusho ukuthi i-bots ikhokhelwe kancane kunezigciwane, i-rootkits, ne-malware. Kodwa-ke, izitayela zashintsha futhi abacwaningi babika ukuthi i-bots inobungozi njengama-viruses ne-computer malware. Zingonakalisa iwebhusayithi yakho futhi zithole ukufinyelela kumasistimu akho, zichithe idumela lakho lesayithi kwi-intanethi - castalia sensial masque hydratant apaisant en. Mayelana nalokhu, uJulia Vashneva, uMphathi we-Senior (Success Senior Success Customer Manager), uzokhombisa ukuthi yini okufanele uyenze uma kwenzeka i-bots ihlasela isayithi lakho.
Qaphela ama-virus nama-bots
Kubalulekile ukuqaphela ama-virus nama-bots. Abanye babo bangakwazi ukuthelela amapulatifomu e-Windows afana namaRobhothi, amaSabots, ama-Agobots, ama-Wootbots nama-Mobots. Ama-bots ambalwa angathinta isofthiwe yakho yeThrojani futhi afakwe ohlelweni lwakho lwekhompyutha ngokuzenzakalelayo. Bakha izinkinga eziningi, behlinzeka ngezindlela zeziphambeko ukuphazamisa idatha yakho bese ukweba ulwazi lwakho lomuntu siqu. Uma unezinombolo eziningi ze-bots kudivayisi yakho, abahlaseli cishe bayothatha ukulawula kwesistimu yakho, futhi kungenzeka ukuthi ngeke ukwazi ukuwayeka wonke..
Njengezinhlobonhlobo zegciwane ne-malware, ama-bots awulula ukuthola futhi angabangela izinkinga eziningi kudivayisi yakho. Uma ufuna ukususa ohlelweni lwekhompiyutha, ungase ulandele lezi zinyathelo ezine ezilula:
Ukusebenzisa iWindows Task Manager
Kufanele ucabange ukusebenzisa umphathi wezinhlelo zeWindows uma ufuna isethi ethile yezicelo. Uma ungenayo imithombo eyanele ukuthola lezo zinhlelo zokusebenza, uceliwe ukuba ungalanda kuzo kusukela emithonjeni engaziwa njengoba abaduni bangase bathathe uhlelo lwakho lwekhompyutha ngaleyo ndlela.
Iskena uhlelo lwakho
Okwesibini nenye yezinyathelo ezibaluleke kakhulu iskena ukuskena kwikhompyutha yakho. Kumelwe uyenze ukuze uqinisekise ukuthi idivayisi yakho ihlala ingenayo amagciwane, i-malware, ne-bots. Ukugijima amathuluzi amaningi anqulo wesi arab akubalulekile. Kunalokho, kufanele usebenzise isofthiwe eyodwa kuphela enamandla futhi ususe amakhodi ngamathuluzi afanele.
Ukuskena amachweba avulekile
Kumele uskenaze ukukhubazeka namaphakheji avulekile ukuze uhlale uphephile phakathi. Ezinye zamathuluzi wokuskena ezinamandla ziyi-Nessus ne-QualysGuard, ezisiza ukukhipha kokubili izikebhe zakho ezivulekile nezivaliwe. Futhi, kufanele uskena isistimu yakho kuzo zonke izinhlobo zegciwane bese uqhuba ukuskena kokuphepha okuqhubekayo njalo.
Isinyathelo sokugcina nesokugcina ukuhlola izifo ze-bot. Lokhu kungenziwa ngokubuka ikhwalithi yethrafikhi ehlasela idivayisi yakho. Kufanele ufake isofthiwe efanele kuphela, bese uzama ukufinyelela kudeshibhodi yakho ye-Google Analytics ukuze uhlole ukuthi uqale ukuthola amahitshi wekhwalithi noma cha.
Lezi ezinye zezindlela ezivelayo nezimangalisayo ongazinamathela kuzo ukuqeda ama-bots kanye nezifo ezibangelwa amagciwane.